एभरेष्ट भ्यू ट्राभल्सका पीडितहरुको तर्फबाट टोनु घोतानेले अदालतमा लड्दै, सम्पर्क गर्न आह्वान ! « MNTVONLINE.COM
एभरेष्ट भ्यू ट्राभल्सका पीडितहरुको तर्फबाट टोनु घोतानेले अदालतमा लड्दै, सम्पर्क गर्न आह्वान !
अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा चार लाख डलरभन्दा बढीको ठगी प्रकरणलाई यहाँका स्थानीय नेपाली मूलका कानून व्यवसायी टोनु घोतानेले पीडितको तर्फबाट अदालतमा मुद्दा लड्ने भएका छन् । हालसम्म ४० जना सम्पर्कमा आइसकेको र उनीहरुको करिब ४ लाख ४० हजार जति ठगी भएको घोतानेले एमएनटीभीलाई बताए । उनले भने, “पीडितहरुलाई हामीले तीन वर्गमा विभाजित गरेर यस मुद्दालाई अघि बढाउँदैछौं । पहिलो मनी ट्रान्सफर मार्फत भएको घोटाला, टिकटको पैसा लिएर नक्कली टिकट दिएको मुद्दा र क्रेडिट कार्डमार्फत पैसा निकाली सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई नदिएको मुद्दा ।”
घोतानेले यस प्रकरणमा व्यवसाय घाटा भएर वा अन्य कुनै कारणबाट पीडितहरुको पैसा डुबेको नभई उनीहरुबाट संकलित रकम नै गायब बनाइएका कारण यसमा ठगी मुद्दा नै आकर्षित हुने धारणा राखे ।
कम्पनीका निर्देशक रामजी पौडेल मात्र नभई त्यस कम्पनीका अन्य निर्देशकहरु, पूर्व निर्देशकहरु र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीका विरुद्ध समेत अदालतमा मुद्दा लगिने भएको छ । घोताने भन्छन्, “कर्मचारीहरुले हामीलाई सहयोग गरेको अवस्थामा उनीहरुलाई साक्षीका रुपमा पेश गर्नेछौं । अन्यथा असहयोग गरेको अवस्थामा उनीहरुविरुद्ध पनि हामीले मुद्दा लैजानुपर्ने हुन्छ । यस प्रकरणमा उनीहरुको पनि संलग्नता रहेको हाम्रो दावी रहनेछ ।”
यस विषयमा भिक्टोरिया प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुसँग समेत छलफल गरिएको र पीडितहरुले अन्य वकिलहरुमार्फत मुद्दा दिएको अवस्थामा ति वकिलहरुसँग समेत समन्वय गरेर काम गरिने उनले स्पष्ट पारे ।
पीडितहरुलाई न्याय दिलाउन केही समय लाग्ने भएका कारण यदि उनीहरुलाई चाहिने स्वास्थ्य र तनाव सम्बन्धी परामर्श समेतका लागि पूर्वतयारी भएको उनको भनाई छ । घोतानेले थप पीडितहरुलाई सम्पर्कमा आउन आह्वान समेत गरेका छन् । उनलेका अनुसार पीडितहरुले [email protected] मा ईमेल गरेर आफ्नो कुरा राख्न सक्नेछन् ।